E gosipụtara n'ụzọ zuru ezu na vidiyo: nke a bụ imewe nke OnePlus 8 | Gam akporosis
E gosipụtara n'ụzọ zuru ezu na vidiyo: nke a bụ atụmatụ nke OnePlus 8
Anyị bụ nanị ụbọchị anọ ka anyị mesịrị nwee nzukọ OnePlus 8 na oke nkọwa. Agbanyeghị, anyị ekpugherela, n'ime ọnwa ole na ole gara aga, ọtụtụ njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ụdị atọ ahụ ga-eme usoro ọhụụ ọhụụ nke ndị nrụpụta China ga-etu ọnụ.
N'ikpeazụ, anyị na-ekpughe ọtụtụ n'ime àgwà ndị ga-abụ nke a na-abịa na Eprel 14 na ngosi na mmemme mmemme nke akara ọhụụ ọhụrụ. Ugbu a, anyị na-eweta ihe ohuru ekpughere nke mbu nke OnePlus 8, nke ewepụtara site na vidiyo, nke bụ nke anyị gosipụtara n'okpuru.
Vidio ahụ, nke egosiri dị ka teaser n'okpuru, ihu oma gosiputara usoro nke OnePlus 8, yana Glacial Green agba nke ụdị ọkọlọtọ na ụdị Pro ga-adị.
A ga-enyekwa OnePlus 8 na Onyx Black na Interstellar Glow, ebe Pro na-enweta Onyx Black na Ultramarine Blue n'akụkụ nhọrọ ndụ ndụ.
Na-ehota ozi anyị na-akọrọ banyere ọnụahịa nke OnePlus 8 na 8 Pro, Anyị chọpụtara na ụdị dị iche iche nke mbụ nke 8 GB nke RAM + 128 GB nke nchekwa na 12 GB nke RAM + 256 GB ga-abata na Europe na ọnụahịa dị iche iche nke 729 na 835 euro.
Ihe nchekwa 8 GB Ram + 128 GB na 12 GBR AM + 256 GB mbipụta nke OnePlus 8 Pro ga-efu 930 na 1.020 euro, n'otu n'otu.
Anyị makwaara nke ahụ ndị a ga-esoro ya rute Qualcomm Snapdragon 865Chipset dị elu nke ana ahụkarị na njedebe arụmọrụ nke afọ a, o nwere isi asatọ na Adreno 650 GPU maka ime egwuregwu na ịchọ eserese. Na mgbakwunye na nke a, ha abụọ nwere ihu igwe teknụzụ AMOLED na modulu igwefoto okpukpu atọ na quad.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara n'ụzọ zuru ezu na vidiyo: nke a bụ atụmatụ nke OnePlus 8